I-Apartment kwi-condominium, induduzo kunye nokhuseleko
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguMaria Ana
I-Apartment ene-suite kumgangatho we-23, kunye nayo yonke into oyifunayo. Indawo egqibeleleyo yezibini, uhambo lomntu ngamnye, uhambo lweshishini kunye nokuzonwabisa, ukusebenza kunye nokhuseleko lwemihla ngemihla. Kufuphi neemarike, ivenkile yokubhaka, iikhemesti, iipaki, iindawo zokutyela, iinkonzo kunye nezothutho, yonke into oyifunayo kule ndawo inendawo entle.
Enye igumbi lokulala eline-suite kunye ne-balcony kumgangatho ophezulu wesakhiwo, igumbi lokuhlala, ikhitshi elinesitovu, ifriji, i-microwave, izitya zasekhitshini kunye neepani, igumbi lokuhlamba impahla kunye nomatshini wokuhlamba, kunye nobumfihlo obupheleleyo kunye nokhuseleko. Isitshixo se-elektroniki, i-concierge yeeyure ezingama-24.
4.68 ·Izimvo eziyi-19
Indawo ezolileyo nekhuselekileyo kufutshane nebutho lamapolisa asemkhosini, kukho indawo yokubhaka kwisitalato sethu, iimarike kunye neekhemesti ezisecaleni kwesakhiwo, iikhilomitha eziyi-1.7 ukusuka eParque do Utinga kunye nebhloko kude neBosque Rodrigo Alves. Sikwanazo neziseko zebhari kunye neendawo zokutyela ezikufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Maria Ana
UMaria Ana yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Marco